Inona no hojerena ao Castellón de la Plana: Tsangambato sy zavaboary | News Travel
Inona no hojerena ao Castellón de la Plana
Louis Martinez | 28/04/2022 09:00 | Tanànan'ny Espana, Inona no ho hita
Tena azo inoana fa efa nanontany tena ianao inona no hojerena ao Castellón de la Plana satria matetika ity tanàna ity dia tsy anisan'ireo mpizahatany indrindra. Na izany aza dia manana zavatra maro azo atolotra izy na amin'ny fomba fijery lova na eo amin'ny tora-pasika sy ny natiora.
Renivohitry ny faritany mitovy anarana, izay ahitana tanàna fahavaratra tsara tarehy toy ny Peniscola o Benicassim, dia niorina tamin’ny 1252 ilay tanàna rehefa nidina tany La Plana ny mponin’i Cerro de la Magdalena. Nahazo alalana avy amin’ny mpanjaka izy ireo James I avy any Aragon ary, noho izany, na dia amin'izao andro izao ny an'i Magdalena dia ny fety ny eo an-toerana. Ary, raha ny marina, ho liana ianao hahafantatra fa nambara ho mahaliana mpizaha tany iraisam-pirenena. Saingy, tsy misy fisalasalana, dia hasehontsika anao ny zavatra hojerena ao Castellón de la Plana.
1 Co-Cathedral de Santa María la Mayor
2 Ny tilikambo lakolosy El Fadrí, tena ilaina amin'ny zavatra hita ao Castellón de la Plana
3 Lapa monisipaly sy Lonja del Cáñamo, ny maritrano baroque an'i Castellón
4 Basilica an'ny Lady of Lidon
5 Lapan'ny episkopaly
6 tsangambato maoderina
7 Architecture avy amin'ny tafika
8 Ny toetran'i Castellón de la Plana
Co-Cathedral de Santa María la Mayor
Mahaliana fa iray amin'ireo katedraly maoderina indrindra any Espaina izy io. Ny tempoly voalohany dia naorina tamin'ny taonjato faha-1936 ary, efa tamin'ny faha-2009, dia nisy iray hafa naorina izay noravana tamin'ny XNUMX. Noho izany antony izany, ny ankehitriny dia vita tamin'ny XNUMX tamin'ny fahavitan'ny cloister sy ny trano toko.
Fomba izany neo-gothic ary manana drafitra latinina miampita gorodona izy io miaraka amin'ny nave telo voarakotra amin'ny vault. Ny lohany dia vita amin'ny apse pentagonal ary ny sambo miaraka amin'ny dome. Tsara homarihina koa ao amin'ny tempoly ny varavarankelin'ny fitaratra voaloto sy ny zavamaneno litorzika izay mipetraka ao amin'ny tempoly. Museum. Saingy, angamba ny singa miavaka indrindra amin'ny co-cathedral dia ilay hasehontsika anao manaraka.
Ny tilikambo lakolosy El Fadrí, tena ilaina amin'ny zavatra hita ao Castellón de la Plana
Ny tilikambon'i El Fadrí, mariky ny Castellón de la Plana
Eny tokoa, miresaka isika Tilikambo lakolosy mijoro malalaka an'ny katedraly miara-miasa, fantatra amin’ny anarana hoe tilikambo El Fadrí, izay eo akaikiny ary tena izy marika tanàna fisaka. Nanomboka tamin’ny taonjato fahadimy ambin’ny folo ny fanorenana azy, na dia tsy vita raha tsy tamin’ny faran’ny taonjato faha-XNUMX.
an'ny fomba Gothic Valencia ary manana drafitra octagonal. Izy io koa dia manolotra faty efatra, izay mifanitsy amin’ny fonja, ny tranon’ny mpamnendry lakolosy, ny efitra fatoriana ary ny efitrano lakolosy. Na izany aza, ireo vatana ireo dia tsy mifanaraka amin'ny tsipika ivelany.
Eo an-tampony dia ahitanao koa ny terrasse voapetaka amin'ny spire telozoro tsara tarehy miaraka amin'ny pilasters Tuscan ary rakotra taila manga. Io dia naorina tamin'ny taonjato faha-1656 mba hanoloana ilay teo aloha izay rava tamin'ny 58. Mahatratra XNUMX metatra ny haavon'ilay tilikambo ary ny gorodona dia mifandray amin'ny tohatra miolikolika.
Lapa monisipaly sy Lonja del Cáñamo, ny maritrano baroque an'i Castellón
Municipal Palace, iray amin'ireo zavatra tena ilaina hojerena ao Castellón de la Plana
Ny ohatra roa tsara indrindra amin'ny rafitra baroque Ny zavatra hita ao Castellón de la Plana dia ireto fanorenana roa ireto. Ny lapan'ny tanàna na tranoben'ny Lapan'ny tanàna dia eo amin'ny kianja mitovy amin'ny katedralin'i Santa María. Naorina teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX izy io ary manana drafitra mahitsizoro.
Izy io dia karazana afa-tsy ary misy rihana telo. Ny gorodona dia misy lavarangana misy andohalambo dimy misaraka amin'ny pilastera voaravaka renivohitra Tuscan. Etsy an-danin'izany, ireo ao amin'ny rihana lehibe dia Korintianina ary manasaraka lavarangana telo, ny afovoany lehibe indrindra. Farany, ny rihana ambony indrindra dia misaraka amin'ny cornice cantilever ary vita amin'ny balustrade ny trano.
Ho an'ny ampahany, ny Tsena Hemp Eo amin'ny Calle Caballeros izy io ary manana drafitra gorodona efamira. Ny gorodona koa dia manana andohalambo tohanan'ny tsanganana sy semi-columns amin'ny lamina Tuscan. Efa tamin’ny taonjato faha-XNUMX, nisy rihana voalohany nampiana izay manaja ny manontolo. Izy io dia manana varavarankely mahitsizoro miafara amin'ny pediment miolikolika amin'ny corbels sy lavarangana mitohy. Farany, cornice mahazatra misy vazy no manakatona ny trano.
Basilica an'ny Lady of Lidon
Io no tranobe ara-pivavahana lehibe hafa hita any Castellón de la Plana. Izy io dia naorina tamin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX teo amin'ny sisa tavela tamin'ny hermitage teo aloha (raha ny marina, ny fonony dia azy). Mamaly ny fomba ihany koa Santionan'izany fiangaly ary misy nave misy chapelle sisiny sy transept misy marika kely. Toy izany koa, ny dome sy ny fanilo iray dia mamarana azy.
Saingy tsy manoro hevitra anao fotsiny izahay hitsidika an'io basilika io noho ny hakantony mahatalanjona, fa koa satria misy ny sarin'ny Virjinin'i Lidon na Lledó, olo-masina mpiaro ny tanànan'i La Plana. Araka ny angano dia tantsaha iray no nahita azy io teo am-pototry ny hackberry na lidón. Izany no nahatonga azy io anarana io.
Manana sary miavaka hafa koa anefa ity fiangonana ity. Anisan'izany ny Virjiny iray natao tamin'ny alabastera ary natao tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay azo inoana fa nataon'ny atrikasa italiana. Amin'ny maha te hahafanta-javatra, dia hilaza aminao izahay fa ny basilika an'i Lidón dia heverina ho ny toerana masina ambanivohitra lehibe indrindra ao amin'ny vondrom-piarahamonina Valencian manontolo.
Lapan'ny Episkopaly ao Castellón de la Plana
Tsangambato manan-danja iray hafa hojerena ao Castellón de la Plana dia ny Lapan'ny Episkopaly, naorina tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX tany. fomba neoclassical. Raha ny marina dia iray amin'ireo vitsy izay misy ao amin'ny tanàna naorina miaraka amin'ny fenitry ny akademika.
Manana vatana roa izy io ary misy pediment miloko miloko napetraka eo amin'ny arofanina ary eo ambany ny fiakanjoan'ny fianakaviamben'ny eveka. Anthony Salinas, izay nanome baiko ny fanorenana ilay trano. Azonao atao ny miditra amin'ny atitany amin'ny alàlan'ny lalantsara misy vault barika midina izay hahatongavanao amin'ny tohatra roa izay voaravaka taila Alcora ny dingana. Na izany aza, ny tohatra lehibe na imperial dia ao aorian'ny vestibule.
Efa eo amin'ny rihana voalohany ny efitrano azo onenana ao amin'ny lapa ary ny gorodonany koa dia misy haingon-trano Alcorense. Farany, ny rihana ambony dia miasa toy ny tafo.
Tranon'ny paositra, iray amin'ireo mari-pamantarana maoderina hita ao Castellón de la Plana
Castellón koa dia manolotra anao tranobe maoderina tsara. Anisan'izy ireo misongadina ny taloha Casino, ny paositra sy ny tobin'omby. Ny voalohany dia naorin'ny mpanao mari-trano tamin'ny 1922 Francis Maristany ary manolotra façade miaraka amin'ny profil misy dingana. Na dia eklektika aza ny fomba fanaony, dia mampiseho firesahana mazava momba ny mahafinaritra Salamanca Plateresque ary, indrindra indrindra, avy ao amin'ny lapan'i Monterrey ao amin'ny tanànan'i charro.
Ho an'ny ampahany, ny paositra Trano mahavariana izy io Demetrius Ribes y Joaquin Dicenta izay vita tamin’ny 1932. Mamaly ny Modernisme Valenciana mitambatra amin'ny fomba neo-Mudejar sy ny bika aman'endriny dia hisarika ny sainao, miaraka amin'ny zorony miolikolika alohan'ny tilikambo miorim-paka ao amin'ny façade iray ihany.
Ary farany, ny bullring dia ny asan'ny Manuel Montesinos ary notokanana tamin’ny 1887. Eo ivelany, ny gorodonany dia misy tohoka biriky mifanitsy amin’ny varavarankely eo amin’ny rihana ambony. Toy izany koa, eo amin'ny fasade lehibe dia misy medaly varahina izay maneho ny lohan'ny omby ary asan'ny mpanao sary sokitra. Joseph Viciano.
Architecture avy amin'ny tafika
Raha ny momba ny tsangambato hojerena ao Castellón de la Plana, hamarana ny dianay miaraka amin'ny fiaviana miaramila roa izahay. Ny voalohany dia ny antso Lapan'i Fadrell na Castell Vell. Izy io dia fiarovana miozolmana izay miorina eo amin'ny havoanan'i Magdalena. Tombanana tamin’ny taonjato faha-XNUMX ny fanamboarana azy ary rava izy amin’izao fotoana izao.
Ny faharoa dia ny alonso turret, izay ao anatin'ny andiana fananganana fiarovana an'ny Levante Espaniola. Izy io dia voatahiry tsara kokoa noho ny teo aloha ary naorina tamin'ny drafitra gorodona mahitsizoro mampiasa masonry sy ashlar.
Ny toetran'i Castellón de la Plana
Fahitana ny efitr'i Las Palmas
Ho famaranana, dia holazainay aminao ny toerana telo manan-danja izay hitanao ao Castellón. Eny ny Vondrom-piarahamonina Valencian andramo, tsy afaka ny tsy hilaza ny tora-pasika. Tsy manana azy ireo ny tanànan’i La Plana, satria efatra kilometatra any afovoan-tany. Na izany aza, raha mandeha amin’io halavirana io fotsiny ianao, dia hahita tora-pasika telo tsara tarehy. Are the Gurugú, Serradal ary El Pinar tora-pasika.
Na izany aza, mbola mahavariana kokoa ny zavatra hita manaraka ao Castellón de la Plana. Miresaka momba ny Nosy Columbretes, izay misy telopolo kilaometatra miala ny morontsiraka ary misy ny fitsangantsanganana. Toerana voajanahary sy an-dranomasina manan-danja izy ireo noho ny lanjany ara-tontolo iainana.
Noho izany, ny hany tokana azonao hidina dia ny Big Columbrete na ny Nosy Grossa, izay ahitanao tilikambo tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy tranobe maromaro hanaovana fikarohana momba ny tontolo iainana. Saingy ny zavatra tena sarobidy amin'ity dia an-tsambo ity dia misy ifandraisany amin'ny toetrany. Raha tia ornithology ianao dia afaka mahita karazana atahorana ho lany tamingana toy ny varevaka Korsika na ny vorondolo Eleanor. Toy izany koa, raha manao fanazaran-tena ianao scuba diving, dia ho variana amin'ny hazan-dranomasina manodidina ireo nosy ianao.
Farany, manoro hevitra anao ihany koa izahay hanao fitsangatsanganana an-tongotra amin'ny alàlan'ny efitr'i las palmas, habaka voajanahary voaaro mirefy efa ho dimanjato hekitara telo arivo izay mivoitra manodidina ny tampon'i Bartolo, fitonjato metatra eo ho eo ny haavony.
Na dia eo aza ny anarany, dia manana zavamaniry, indrindra indrindra, hazo kesika, frezy ary fo palmie. Ary koa miaraka amin'ny biby mahaliana izay misongadina ny kestrel, ny warbler, ny bibilava kitron-tsoavaly ary ny saobakaka natterjack.
Ho famaranana, nasehonay anao inona no hojerena ao Castellón de la Plana. Araka ny efa nohamarininao, ny tanànan'i Levantine dia manolotra anao be dia be, na dia tsy hita ao amin'ny fitsangatsanganana fizahan-tany lehibe aza. Na ahoana na ahoana, azonao ampifandraisina amin'ny fitsidihanao ny tanànan'i La Plana izany, ohatra amin'ny fijanonana ao Oropesa del Mar. Tsy te hahalala izany ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Inona no hojerena ao Castellón de la Plana
trano fisakafoanana lafo indrindra eran-tany